Warshadda Waxyaabaha Kale - Shiinaha Soosaarayaasha Waxyaabaha Kale, Alaab-qeybiyeyaal
Ku darida caaga
Wakiilka Brightener indhaha
Waxyaalaha dahaadhka leh
Adeegga farsamada & iibka kadib
Magaca Kiimikada: 1,2-Propyleneglycol diacetate CAS NO.:623-84-7 Formula Molecular ： C7H12O4 Molecular Weight ： 160 Qeexitaanka Tilmaamaha: Dareeraha saafi ah ee aan lahayn midabka Molecular: 160 Daahir%: ≥99 Barta iling .3 101.3kPa）: 190 ℃ ± 3 Qiyaasta biyaha%: -0.1 Bar dhibic （koob furan）: 95 value Qiimaha Acid mgKOH / g: ≤0.1 Indha indheynta ract 20 ℃）: 1.4151 Cufnaanta qaraabada （20 ℃ / 20 ℃: 1.0561 Midabka （APHA）: ≤ 20 Codsiga soosaarida weelka biyaha, waxsoosaarka wakiilayaasha daaweynta biyaha, khafiifiyeyaasha biyaha ka dhasha
Magaca Badeecada: Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB) CAS No.: 7580-85-0 formula Molecular: C6H14O2 Miisaanka molikalka: 118.18 Waxyaabaha jirka iyo kiimikada ee Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB): Waa shey kiimiko dabiici ah, aan midab lahayn isla markaana hurin kara. dareeraha leh dhadhanka reexaanta. Ku milma inta badan dareeraha dabiiciga, wuxuu kala diri karaa amino, nitro, alkyd, acrylic iyo resins kale. Heerkulka qolka (25 ° C), ayaa lagu khaldami karaa biyo, sumoobo hooseeya, cuncun yar. Sababta oo ah ...
Xannibaadda Isocyanate Crosslinker KL-120
Magaca kiimikada: Iskuday Isocyanate Crosslinker Farsamaynta farsamada: Muuqaalka muuqaalka midabka huruudda ah ee dareeraha jilicsan Waxyaabaha adag 60% -65% Waxtarka NCO waxtar leh 11.5% Waxtar leh NCO u dhiganta 440 Viscosity 3000 ~ 4000 cp 25 ℃ Cufnaanta 1.02-1.06Kg / L at 25 temperature Heerkulka 110-120 ℃ Faafitaanka waxaa lagu kala diri karaa dareeraha dabiiciga ee caadiga ah, laakiin sidoo kale waxaa si fiican loogu kala firdhiyaa dahaadhka biyaha. Adeegsiga la soo jeediyay: Daaweynta kuleylka kadib, soonka filimka rinjiga si weyn ayaa loo horumarin karaa iyadoo lagu daro au ...
Hyino-methylated Amino Resin DB303
Sharaxaadda Badeecada: Waa wakiil iskudhafan oo iskudhaf ah oo loogu talagalay noocyo badan oo polymeric ah, labadaba organo milmi kara iyo biyo dhasha. Qalabka polymeric waa inuu ka kooban yahay hydroxyl, carboxyl ama amide groups oo ay ku jiri doonaan alkyds, polyesters, acrylic, epoxy, urethane, iyo cellulosics. Sifada Badeecada: Daahfurnaan adag-filim jilicsan Jawaab dhaqso ah oo dhaqso leh Iskudhafid Fududeyn la'aan iyo iskufilnaan Xasilooni heer sare ah ： Adag ≥ 898% V ...
WAKIILKA QAYBTA OT75
Nooca badeecada: Anionic surfactant Sodium diisooctyl sulfonate Specification Muuqaalka: midab aan lahayn iftiin huruud dareere PH ah: 5.0-7.0 (1% xal biyo ah) Gelitaanka (S.25 ℃). ≤ 20 (0.1% xal biyo ah) Waxyaalaha firfircoon: 72% - 73% Waxyaabaha adag (%): 74-76% CMC (%): 0.09-0.13 Codsiyada: OT 75 waa wakiil awood leh, qoyan qoyan oo leh qoyn aad u fiican, milanka. iyo emulsifying action oo lagu daro awooda hoos u dhigida xiisadda dhex-dhexaadka ah. Sida wakiilka qoynta, waxay noqon kartaa u ...
Magaca Badeecada CAS MAYA. Wakiilka Iskuxirka Iskuxirka Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Gawaarida waa la dhameeyay ； Dahaarka weelka ； Birta guud way dhamaataa ； Dhamaadka adkaanta ； Dhamaadka biyaha kudhamaada coat Dahaarka gariiradda. Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 In kor loo qaado isku-darka lacquer-ka ee loo yaqaan 'substrates' kala duwan, la hagaajiyo caabbinta xoqidda biyaha, daxalka kiimikada, heerkulka sare ee iska caabinta iyo iska caabinta dusha sare ee rinjiga oo la xiray Iso .. .
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: 3-Phenoxy-1-propanol formula Molecular: C9H12O2 Miisaanka muruqyada: 152.19 CAS MAYA .: 770-35-4 Tilmaamaha farsamada: Tijaabinta Alaabada Fasalka Warshadaha Muuqaalka Iftiinka Jaalaha Jaalaha ah Assay% ≥90.0 PH 5.0-7.0 APHA ≤100 Isticmaal: PPH waa dareere hufan oo aan midab lahayn oo ur macaan udgoon fiican leh. Waa astaamo aan sun ahayn oo deegaanka u roon si loo yareeyo rinjiga V ° C saamaynta waa mid cajiib ah. Maaddaama ay iskujirto wax ku ool ah emulsion biyo iyo daahan kala firidhsan gloss iyo semi-gl ...
Magaca kiimikada: Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate formula Molecular: C20H33N3O7 Miisaanka muruqyada: 427.49 CAS Maya .: 57116-45-7 Tusmada farsamada: Muuqaalka midab la’aan inuu noqdo huruud hufan oo hufan Biyo-biyo-baxa si dhammaystiran loogu fahmi karo biyaha 1: 1 bilaa xaddidan Ph (1: 1) (25 ℃) 8 ~ 11 Viscosity (25 ℃) 1500 ～ 2000 mPa · S Waxyaabaha adag ≥99.0% Amine Bilaash ah ≤0.01% Waqtiga iskutallaabta waa 4 ~ 6 h Iskudhicida xoqida ...
Daawada loo yaqaan 'ethylene glycol diacetate' G EGDA）
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Ethylene glycol diacetate Molecular formula: C6H10O4 Miisaanka jirka: 146.14 CAS MAYA .: 111-55-7 Tusmada farsamada: Muuqaalka: dareere hufan oo aan midab lahayn Tusmada: ≥ 98% Qoyaan: ≤ 0.2% Midab (Hazen): ≤ 15 Sunta: ku dhowaad aan sun ahayn, miisaanka loo yaqaan 'rattus norvegicus oral LD ​​50 = 12g / Kg weight. Isticmaal: Sida dareeraha loo isticmaalo rinjiga, dhejiska iyo wax soo saarka rinjiyeyaasha waxsoosaarka. Si qayb ahaan ama gebi ahaanba loo beddelo Cyclohexanone, CAC, Isophorone, PMA, BCS, DBE iwm, oo leh astaamo lagu hagaajinayo isbarbar dhigga, hagaajinta qalajinta s ...
Telefoon ： 86-25-58853060
Emayl ： sales@njreborn.com
Cinwaanka ： Qolka 1409, 20 Xinghuo Road, Degmada Pukou, Nanjing City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha 210032